Itiyoophiyaan Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand sadaffaa taatee xumurte
Monday, 25 July 2016 08:41
Finfinnee, Adoolessa 18, 2008 Itiyoophiyaan Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii 16ffaa Poolaanditti geggeeffame sadaffaa taatee xumurte.
Itiyoophiyaan kaleessa warqee arfaffaa meetira 1,500 dubartootaa Atleet Adaanach Anbassaan argatteetti.
Dorgommii cufiinsaa kaleessa geggeeffame biraan meetira kuma 3 gufachiisaan Atleet Geetinnat waale si’a lama kufus biyyasaaf meedaaliyaa birrii argamsiiseera.
Shaampiyoonaa kanaan meetira kuma 5 dhiirotaan Atleet Solomoon Baragaa, meetira kuma 3 dubartootaan Atleet Bayyanuu Dagafuu akkasumas meetira kuma 5 dubartootaan Atleet Qaalkidaan Fantee Itiyoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee argamsiisaniiru.
Shaampiyoonaa kanaarratti Atleet Huwaalaayee Ballaxaa tarkaanfii meetira kuma 10 meedaaliyaa maaldaa argachuun biyyaasheef seenaa haaraa galmeessisuunshee kan yaadatamudha.
Dorgommii meetira kuma 10 dhiirotaa qabxiin itti eegamaa tureen Itiyoophiyaan meedaaliyaa hin arganne.
Meedaaliyaawwan warqee Itiyoophiyaan argatte arfan keessaa sadii kan argaman dubartootaani.
Shaampiyonaan Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand kaleessa wayita xumuramu Itiyoophiyaan meedaaliyaawwan warqee 4, birrii 2 fi maaldaa 4n addunyaarraa sadaffaa , Afriikaa irraa ammoo lammaffaa taatee xumurteetti.
Ameerikaan meedaaliyaawwan warqee 11, birrii 6 fi maaldaa 4n tokkoffaa taatee wayita xumurtu, Keeniyaan warqee 5, birrii 2 fi maaldaa 2n lammaffaa taateetti.
Madda: www.iaaf.org/ (FBC)
More in this category: « Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa irratti Atleet Solomoon Baragaa warqee sadaffaa argamsiise Federeeshinichi Heeniikan waliin ispoonsara Birrii miiliyoona 30 walii mallatteesse »
Torbe Kana 1674
Ji'a Kana 1674
01/05/07 irraa eggalee 3422845